Oduu Mormii Magaalaa Finfinneetti dhalateen namoonni sadii ajjeefaman. – gamtaa site
Oduu Mormii Magaalaa Finfinneetti dhalateen namoonni sadii ajjeefaman.
OMN:Oduu Caamsaa 18,2016 Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Booleetti, ijaarsa seeraan alaa manniinii jechuun, bulchiinsi magaalattii, manniin jiraattotaa wayta diigaa turetti, mormii uumameen, dhukaasa poolisoonni Federaalaa roobsaniin namoonni sadii ajjeefamuun himame.
Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Boolee Bulbulaa naannawaa Warra Gannuu jedhamutti, guyyaa hardhaa Caamsa 18 bara 2016 maqaa ijaarsa seeraan alaa manniin jechuun wayta bulchiinsi magaalattii manniin diigaa jirutti mormii dhalateen, poolisoonni Federaalaa namoota sadii ajjeesuun himamee jira.
Miidhaan hamaan Poolisoota namoota ajjeesan kanarra gahuunis ibsame.
Jiraataan magaalaa Finfinnee tokko akka jedhanitti, akka laakkofsa biyyattiittii ganama hardhaa ture, bulchiinsi magaalaa Finfinnee ijaarsa seeraan alaa jechuun wayta manniin jiraattotaa diigaa jirutti kan mormiin isaan muudate.
Booda ammoo poolisoonni Federaalaa meeshaa waraanaa hidhatan jiraattota manniin keenna nurraa diiggamuu hin qabu jechuun mormatan irratti dhukaasa roobsaniin battalumatti lubbuun namoota sadii darbee jira.
Akka namni kun jedhanitti, bulchiinsi magaalatti manneen kun seeraan ala ijaaraman haa jedhu malee dhugaan jiru sanii miti.
Jiraattoonni ajjeefaman kun ijaarsa seeraan alaa manniin isaanii kan ijaaratan osoo hin taane, lafa san irratti kan dhalataniidha.
Mootummaan humanaan biyyattii bulchaa jiru ammoo ta’e jedhee lubbuu namoota nagaa baasaa jira.
Kana gochuun isaa mootummichaa karaa dhoksaa ta’een, karoora maastar pilaanii Finfinnee hujii irra oolfataa jira jedhan.
Jiraataan magaalaa Finfinnee kun itti dabaluun jiraattota lafa kanarratti handhuurri isaanii bu’e lafa irraa buqqisanii lafa san abbootii qabeenyaaf kennuuf ajjeechaa kana raawwataa jiru jedhan.
Wayta gara garaatti ijaarsa seeraan alaa manniinii jechuun magaalaawwan Oromiyaa hedduu keessatti diiggamiinsa geggeeffamee tureen, lubbuun namoota baayyeetis darbuun isaa kan yaadatamuudha.
← A certain Girma G. Kassa got hold of some statistics on Ethiopia’s demography and then went ahead with making a mess o…
Ginbot 20: Marks Deeper Problems →